06 | novembre | 2020 | InfoKmada
Madagasikara : tonga ny Satro-boninahitry ny tatarom-piandrianan’ny mpanjakavavy Ranavalona faha III
InfoKmada - 6 novembre 2020 0
123 taona aty aoriana, tafaverina amin’i Madagasikara ny Satro-boninahitry ny tatarom-piandrianan’ny mpanjakavavy RANAVALONA Faha-3. Nisy ny lanonana manetriketrika nandraisana izany androany ary napetraka ao amin’ny Rovan’i Manjakamiadana. Ny satro-bonihatry ny tatarom-piandrianan’ny mpanjakavavy RANAVALONA faha-3 izay mariky ny fiandrianam-pirenena.
Fiverenan’ny vakoka : zava-dehibe ho an’ny Malagasy
Zava-dehibe ho an’ny tantaram-pirenena ny fiverenan’ny vakoka tahaka izao hoy ny fanehoan-kevitry ny olompirenena nandritra ny fitsenana sy ny fametrahana ny Satro-boninahitry ny Tatarom-piandrianan’ny mpanjakavavy RANAVALONA Faha-3 androany. Mamerina ny ambom-pom-pirenena izany raha ny fanazavana.
« Nouvelle ville »: hatsangana eny Imeritsiatosika
Eny Imeritsiatosika no hananganana ilay tetikasan'ny filohan'ny Repoblika « Nouvelle ville Tanamasoandro » na tanàna vaovao raha ny nambaran'ny minisitra lefitra misahana ny tanana vaovao sy ny toeram-ponenana. Mora kokoa ny dingana fanantanterahana izany any an - toerana araka ny fanazavana raha mitaha amin'ny fikasana anangana izany teny Ambohitrimanjaka.
LFI 2021 : 4 165 Lavitrisa Ariary no andrasana amin’ny fampidiran-ketra ny taona ho avy
Manodidina ny 4 165 Lavitrisa Ariary ny vola andrasana amin’ny fampidiran-ketra ny taona ho avy araka ny voafaritra anatin’ny lalàna hifehy ny tetibolam-panjakana ho an’ny taona 2021. Lafin-javatra maro no ilaina fanarenana hanatrarana ny fanamby, hoy ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Tafiditra anatin’izay ny fametrahana ny tetikasa ANJARA HETRAKO, izay natomboka tamin’ny fomba ofisialy teny Ambohidratrimo.
EPP Mandroseza : tsy mbola naverina ny volan’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra
Tsy mbola naverin’ny tomponandraikitry ny sekoly ambaratonga fototra etsy Mandroseza ny volan’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra izay notakiana tamin’izy ireo hampidirana mpianatra vaovao. Iharan’ny fandrahonana ankilany izzy ireo raha toa ka mitaky izany raha ny fanazavana.
e-ariary : mandeha ny dingana amin’ny fametrahana azy
Anatin’ny herintaona no vinavinaina ho tafapetraka eto Madagasikara ny e-Ariary, na ny monnaie digitale de banque centrale. Efa mande ny dingana amin’ny famolavolana azy raha ny fanazavana. Teboka maro no tsy maintsy hamafisina mialohan’ny hampiharana izany eto amintsika.
Centre Vonjy : mandray an-tanana mivantana ireo zaza iharan’ny fanolanana
Nirongatra tato ho ato ny herisetra atao amin’ny zaza tsy ampy taona eto amintsika. Ho an’ny Centre Vonjy Befelatanana, niakatra hatrany amin’ny 92 ny isan’ireo tranga noraisina an-tanana ny volana septambra sy oktobra lasa teo. Mandray an-tanana mivantana ho fanampianana ireo izay niharan’izany ny ivon-toerana « Centre Vonjy » Befelatanana.